VoIP၊ DID နံပါတ်များနှင့် Virtual နံပါတ်များ
နိုင်ငံပေါင်း ၈၉ ခုနှင့်မြို့ပေါင်း ၂၉၀ အတွက် VoIP နှင့် Virtual နံပါတ်များ (အဝင်ခေါ်ဆိုမှုအားလုံးသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်)
2 $ / တစ်လမှစ
Toll Free၊ ဒေသတွင်းနှင့်အမျိုးသားနံပါတ်များ
တစ်ကြိမ်အခကြေးငွေဒေါ်လာ ၁၀၀ သတ်မှတ်ပါ
နိုင်ငံတကာ Roaming ဝန်ဆောင်ခမရှိပါ
virtual နံပါတ်များနှင့်နိုင်ငံပေါင်း 100 နှင့်မြို့ကြီးများ 290 ။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ - Virtual နံပါတ်
89 နိုင်ငံများ / 260 မြို့ကြီးများ
သင်၏စီးပွားရေးကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်လည်းပူးပေါင်းရန် CRM ပေါင်းစည်းမှုဖြင့်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
သင်၏နိုင်ငံ၊ စီးပွားရေး၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ မှန်ကန်သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်ရန်တစ်ကြိမ်တည်းသာတပ်ဆင်ခ။
Cloud ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အသံနှင့် SMS
တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အလွတ်
လေးလံသောပစ္စည်းကိရိယာများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မလိုဘဲသင်၏နိုင်ငံတကာခေါ်ဆိုမှုကိုစတင်ပါ။ နောက်ထပ်မျိုးဆက်သစ် VoIP ကိုသင့်အားပေးမည်။
၅ မိနစ်တောင်မပြည့်ခင်သင်၏အဆက်အသွယ်စင်တာကိုသင့်ဖောက်သည်များသို့မဟုတ်အခြားနေရာများသို့ရောက်ရှိရန်ဆက်သွယ်မှုစင်တာ (သို့) CRM အတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအသံနှင့် SMS ဖြင့်လည်ပတ်ပါ။
ဒေသတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်များအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသော elastic SIP ပင်စည်ဝန်ဆောင်မှုဖြင့်သင်၏တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုရောက်ရှိပါ။ Call မှ Conferencing သို့သင်လိုအပ်သမျှ
Virtual Number ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
စတင်ရန်သင့်အားနိုင်ငံ (များ) နှင့်မြို့ (မ်ား) ကိုဖော်ပြသည့်အမှာစာကိုစီစဉ်ရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးမန်နေဂျာသည်နိုင်ငံ (များ) နှင့်မြို့ (များ) အပေါ် အခြေခံ၍ နံပါတ်ရွေးချယ်မှုများကိုပေးလိမ့်မည်။
Soft Phone ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
TOP CRMs နှင့် Messenger နှင့်အတူပေါင်းစည်း
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှပေးသော VoIP ဝန်ဆောင်မှု
တိမ်တိုက် PBX | အခမဲ့ PBX
ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ PBX PBX သည်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းကြံ့ခိုင်သောစီးပွားရေးဖုန်းစနစ်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ PBX သည် IVR, Call Forwarding နှင့်စွမ်းအားမြင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထောက်ပံ့သည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်သောလူတစ်ယောက်ပင် virtual နံပါတ်များကိုစတင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
Cloud PBX, ကိုလည်း virtual အဖြစ်လူသိများသည် PBX နှင့် PBX တည်ခင်း.ည်ကျွန်ုပ်တို့သည် IP- ပံ့ပိုးရန်နောက်ဆုံးပေါ် cloud နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။PBX ကိုအခြေခံသည် 3G, 4G ကွန်ယက်သို့မဟုတ်ပုံမှန် Wi-Fi နှင့်အင်ထရာနက်ပင်လျှင်လုံးဝ ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်အဖြေများ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Cloud-based VoIP ဖြေရှင်းချက်များနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထိထိရောက်ရောက်စီမံခန့်ခွဲရန်မည်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းများမှမဆိုအသေးစား၊ အလတ်စားနှင့်အရွယ်အစားကြီးသောအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တတ်နိုင်သောဖြေရှင်းနည်းများဖြစ်သည်။
မျိုးဆက်သစ် အသံ နှင့် conferencingထောက်ပံ့ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် နှင့် အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု.
အကောင်းဆုံး VoIP ကုမ္ပဏီများ အကောင်းဆုံး VoIP ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ | အကောင်းဆုံး VoIP ဖြေရှင်းချက်များ အကောင်းဆုံး VoIP ၀ န်ဆောင်မှုများ အကောင်းဆုံး VoIP ပြန်လည်ရောင်းချသူများ
ဆက်သွယ်ရန် CLOUD PBX ရ
Virtual နံပါတ်များ VoIP နံပါတ်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Multi-channel virtual ဖုန်းနံပါတ်များနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ သည်သင်၏ဖုန်းနှင့်ကမ္ဘာပတ် ၀ န်းကျင်ကို ၅ မိနစ်အတွင်းဖုန်းပစ္စည်းများကိုအသုံးမပြုဘဲဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အခမဲ့ပေးသောနံပါတ်များအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ တွင် virtual နံပါတ်များကိုကမ်းလှမ်းသည်။ Virtual ဖုန်းနံပါတ်များကိုဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း။
သေဆုံးသူ - အခမဲ့ဖုန်းနံပါတ်များ
အကောင်းဆုံး Virtual နံပါတ်များကုမ္ပဏီများ အကောင်းဆုံး Virtual Number ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ အကောင်းဆုံး Virtual Numbers Solutions | အကောင်းဆုံး Virtual Numbers ၀ န်ဆောင်မှုများ အကောင်းဆုံး Virtual နံပါတ်များပြန်လည်ရောင်းချသူများ
VIRTUAL NUMBER ကိုရယူပါ
VoIP ခေါ်ဆိုမှုများ အခမဲ့အဝင်ခေါ်ဆိုမှု
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖုန်းခေါ်ဆိုခကို ၉၀% အထိလျှော့ချနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သောဖုန်းခေါ်ဆိုခနှုန်းထားများနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖုန်းနံပါတ်များ၊ တစ်စက္ကန့်လျှင်ငွေတောင်းခံမှုများနှင့်မိုဘိုင်းနှင့်စားပွဲခုံများအတွက်အခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းများဖြင့်ကူညီနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက်အခမဲ့သုံးစွဲနိုင်သောကိုယ်ပိုင်ဆော့ဖ်ဝဲများရှိသည်။
● HD ခေါ်ဆိုမှုအရည်အသွေး မင်းရဲ့စီးပွားရေး ကျနော်တို့သာဖြန့်ဝေ ပရီမီယံလမ်းကြောင်းများ!
●စျေးနှုန်းချိုသာသောခေါ်ဆိုမှုနှုန်း နှင့် နိုင်ငံတကာစျေးနှုန်းအစီအစဉ်.
●အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုများ သင်၏အသင်းနှင့် 96+ နိုင်ငံများသို့အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှု.
●အခမဲ့ Roaming သင်၏ဖုန်းနံပါတ်အတွက်အင်တာနက်လိုအပ်သည်။
●လုံခြုံတဲ့ခေါ်ဆိုမှု။ (TLS, VPN ကို နှင့် SRTP စာဝှက်ခြင်း)
“ သင်၏နိုင်ငံတကာခေါ်ဆိုခကို ၉၀% လျှော့ချပါ။
အကောင်းဆုံး VoIP ခေါ်ဆိုမှုကုမ္ပဏီများ အကောင်းဆုံး VoIP ခေါ်ဆိုမှုဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ | အကောင်းဆုံး VoIP ခေါ်ဆိုမှုအတွက် | အကောင်းဆုံး VoIP ခေါ်ဆိုမှုဝန်ဆောင်မှု | အကောင်းဆုံး VoIP ခေါ်ဆိုမှုပြန်လည်ရောင်းချသူများ
အမေရိကန် CONTACT စတင်ခေါ်ဆို
ဆက်သွယ်ရန်စင်တာ VoIP ဝန်ဆောင်မှုများ | Call Center VoIP ဝန်ဆောင်မှု
သင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်စင်တာသို့မဟုတ် cloud contact center တိုးချဲ့ရန်အတွက် local နှင့် toll free route များကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ 290 နှင့်တည်နေရာများစွာအတွက် SIP ဆက်သွယ်မှုဖြင့်သတ်မှတ်ပါ။ အသံနှင့် SMS ကိုနှစ်လမ်းသွားဆက်သွယ်ရေးအတွက်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းပေါင်းစပ်ပါ။
●ဒေသဆိုင်ရာရောက်ရှိခြင်း သို့မဟုတ် SIP ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာ၌မဆို
●နိုင်ငံပေါင်း ၉၆ နိုင်ငံသို့အခမဲ့အသံခေါ်ဆိုမှုများ.
●သင်၏အဆက်အသွယ်စင်တာကိုအခြားအဆင့်သို့ခေါ်ဆောင်ပါ အခမဲ့ conferencing ၏စွမ်းရည်
●အခမဲ့ CRM ပေါင်းစည်းမှု.
●ဒေသဆိုင်ရာဒေတာသိမ်းဆည်းခြင်းအစီအစဉ်များနှင့် GDPR နှင့်အပြည့်အ ၀ လိုက်နာခြင်း။
ဆက်သွယ်ရန်စင်တာကုမ္ပဏီများ အကောင်းဆုံးဆက်သွယ်ရေးစင်တာဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ အကောင်းဆုံးဆက်သွယ်ရန်စင်တာ Solutions | အကောင်းဆုံးဆက်သွယ်ရေးစင်တာ ၀ န်ဆောင်မှုများ အကောင်းဆုံးဆက်သွယ်ရန်စင်တာပြန်လည်ရောင်းချသူများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါ်ဆိုမှု packages များ
နံပါတ် (များ) အတွက်သာငွေပေးချေ
$ မှ0.00 / လ
အခမဲ့မိနစ်ပိုင်းများ - တစ်မိနစ်လျှင် ၀.၂၂ ဒေါ်လာမှနိုင်ငံပေါင်း ၂၀ သို့ခေါ်ဆိုပါ
အများဆုံးအသုံးပြုသူ / စက်ပစ္စည်းများ (int လိုင်းများ): 30
ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းအတွက် Cloud သိုလှောင်မှုပမာဏ၊ Mb: 200
PBX အတွင်းရှိအသံ menus များ (IVR): ၃
ပြင်ပဖုန်းနံပါတ်ပေါ်ရှိအဝင်လိုင်းများ - ၁
ပြင်ပဖုန်းနံပါတ်ပေါ်မှထွက်လာသောလိုင်းများ - 0
အခမဲ့ CRM ပေါင်းစည်းမှု: 
$ 100 (တစ်ကြိမ်တည်းသတ်မှတ်ခြင်းအခကြေးငွေ)
ကုန်းလမ်း Puerto Rico
အမေရိကန် / ကနေဒါ
$ မှ44.00 / လ
အများဆုံးအသုံးပြုသူ / စက်ပစ္စည်းများ (int လိုင်းများ): 50
ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းအတွက် Cloud သိုလှောင်မှုပမာဏ၊ Mb: 2000
ပြင်ပဖုန်းနံပါတ်ပေါ်မှထွက်လာသောလိုင်းများ - 1
$ 100 (တစ်ချိန်တွင် setup အခကြေးငွေ) + $ 44
$ မှ26.00 / လ
$ 100 (တစ်ချိန်တွင် setup အခကြေးငွေ) + $ 26
ကြိုးဖုန်း, မိုဘိုင်း၊ အခမဲ့ virtual phone နံပါတ်များ ဒိန္းမတ္
ကြိုးဖုန်း, မိုဘိုင်း၊ အခမဲ့ virtual phone နံပါတ်များ ဂျာမနီ
ကြိုးဖုန်း, မိုဘိုင်း၊ အခမဲ့ virtual phone နံပါတ်များ
ကြိုးဖုန်း, မိုဘိုင်း၊ အခမဲ့ virtual phone နံပါတ်များ ဟန်ဂေရီ
ကြိုးဖုန်း, မိုဘိုင်း၊ အခမဲ့ virtual phone နံပါတ်များ အိႏၵိယ
ကြိုးဖုန်း, မိုဘိုင်း၊ အခမဲ့ virtual phone နံပါတ်များ ဣသရလေ
ကြိုးဖုန်း, မိုဘိုင်း၊ အခမဲ့ virtual phone နံပါတ်များ ရိုမေးနီးယား
ကြိုးဖုန်း, မိုဘိုင်း၊ အခမဲ့ virtual phone နံပါတ်များ ဆလိုဗက်ကီး
ကြိုးဖုန်း, မိုဘိုင်း၊ အခမဲ့ virtual phone နံပါတ်များ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ
ကြိုးဖုန်း, မိုဘိုင်း၊ အခမဲ့ virtual phone နံပါတ်များ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
$ မှ37.00 / လ
$ 100 (တစ်ချိန်တွင် setup အခကြေးငွေ) + $ 37
လီမာ landline ပေါ်တူဂီ
လုံခြုံရေးအတွက် VPN, SRTP နှင့် TLS စာဝှက်စနစ်။
ဒေသဆိုင်ရာနံပါတ်များ၊ HD နံပါတ်များ၊ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနံပါတ်များနှင့်နိုင်ငံတကာနံပါတ်များအတွက်အသံ။
မည်သည့် CRM (သို့) Social media platform တွင်မဆိုပေါင်းစပ်ပါ။
99.99% ဝန်ဆောင်မှု uptime ။
ပိုမိုကောင်းမွန်သောကုန်ကျစရိတ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအတွက်သင်၏ခေါ်ဆိုမှုအသွားအလာကိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သောအသေးစိတ် dashboard ။
အနိမ့်ဆုံးအမျိုးအစားနှုန်းထားများမှအောက်ဖော်ပြပါခေါ်ဆိုမှုနှုန်းထားများ၊ သင်၏အကောင့်ကိုမတည်ထောင်မီသင့်တိုင်းပြည်နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပြီးသင်၏လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ နောက်ဆုံးနှုန်းထားများကိုပေးပါတယ်။
Antigua နှင့် Barbuda ရှိ VoIP
Puerto Rico ရှိ VoIP
Saint Kitts ရှိအသံ
Montenegro ရှိ VoIP
San Marino ရှိအသံ
New Hampshire ရှိအသံ
Pennsylvania ပြည်နယ်ရှိ VoIP
Rhode Island ရှိအသံ
Utah ရှိ VoIP
Wyoming အတွက် VoIP
ကျွန်ုပ်တို့၏ပံ့ပိုးမှုသို့မဟုတ်ပံ့ပိုးမှုမပေးပါ VoIP ဖြေရှင်းချက်များ အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ:
Virtual နံပါတ် ၀ န်ဆောင်မှု ကုန်သည်များသို့မဟုတ်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများကိုပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
နံပါတ်ဝန်ဆောင်မှုများ DID VoIP ၏နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းသူလျှိုများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမှုမရှိပါ။
VoIP ဖုန်းစနစ် မည်သည့်တရားမဝင်သို့မဟုတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးကြသည်မဟုတ်။
Virtual ဖုန်းနံပါတ်များ မျိုးရိုးဗီဇပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
VoIP ခေါ်ဆိုမှုများ လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများရောင်းဝယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်သောကုမ္ပဏီများအတွက်မရနိုင်ပါ။
စီးပွားရေး VoIP စနစ် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
DDI ဖုန်းနံပါတ်များ အပြာစာပေနှင့်ဆိုင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုခွင့်မပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ ဆက်သွယ်ရန်စင်တာများ or ခေါ်ဆိုခစင်တာများ supporting MLM ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။
Cloud PBXaor SIP ရပ်စဲ မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကိုရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မရရှိပါ။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : Million Makers သည်ဖောက်သည်များအတွက် KYC စာရွက်စာတမ်းများကိုမှန်ကန်စွာထိန်းသိမ်းရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာ VoIP ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းမှပေါ်ထွက်လာနိုင်သောမည်သည့်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာ ၀ န်မရှိပါ။
နံပါတ်နှင့် VoIP DID
VoIP၊ VoIP နံပါတ်များ၊ virtual နံပါတ်များ၊ VoIP ဖုန်းများ၊ DID နံပါတ်များ၊ DDI နံပါတ်များ၊ နိုင်ငံတကာနံပါတ်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖုန်းနံပါတ်များ၊ မိုဘိုင်း VoIP၊ VoIP ခေါ်ဆိုမှုများ၊ VoIP ဖုန်းစနစ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် VoIP တယ်လီဖုန်းစနစ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် VoIP၊ စီးပွားရေးအတွက် VoIP၊ စီးပွားရေးနံပါတ်၊ စီးပွားရေး VoIP စနစ်၊ VoIP PBX၊ ပုံသေ VoIP, ပုံသေ VoIP, VoIP တယ်လီဖုန်း၊ VoIP ခလုတ်၊ VoIP စနစ်၊ စီးပွားရေး VoIP ဖုန်း၊ အိမ်အတွက် VoIP ဖုန်း၊ လူသိများသောလူနေအိမ် VoIP၊ VoIP လိုင်း၊ VoIP စီးပွားရေးဖုန်း၊ VoIP အွန်လိုင်းအဓိပ္ပာယ်တိမ်၊ VoIP ကြိုးဖုန်း၊ အခမဲ့ဖုန်းနံပါတ်များ၊ VoIP ဖုန်းနံပါတ်များ၊ virtual ဖုန်းနံပါတ်များ၊ DID ဖုန်းနံပါတ်များ၊ DDI ဖုန်းနံပါတ်များ၊ စီးပွားရေးအတွက် VoIP၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း VoIP၊ ခေါ်ဆိုမှုအတွက်၊ စီးပွားရေးခေါ်ဆိုမှုများအတွက် virtual နံပါတ်၊ မိုဘိုင်း virtual နံပါတ်များ၊ VoIP တံခါးပေါက်၊ စီးပွားရေးအတွက် virtual နံပါတ်များ၊ အိမ်အတွက် virtual နံပါတ်များ၊ စီးပွားရေး virtual နံပါတ်စနစ်၊ DID ဖုန်းနံပါတ်များ၊ ခေါ်ဆိုမှုအတွက် DID နံပါတ်၊ mobile DID နံပါတ်များ၊ s၊ အိမ်အတွက် DID နံပါတ်များ၊ စီးပွားရေး DID နံပါတ်စနစ်၊ အွန်လိုင်းစီးပွားရေးအတွက် virtual နံပါတ်၊ အဆက်အသွယ်စင်တာဖြေရှင်းနည်းများ၊ Call စင်တာဖြေရှင်းနည်းများ၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် VoIP ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် virtual နံပါတ်များ၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် DID၊ Cloud PBX၊ VoIP ရပ်စဲခြင်းနှင့် SIP ရပ်စဲခြင်း။
ကျနော်တို့အကြားထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည် အကောင်းဆုံး VoIP ကုမ္ပဏီများအကောင်းဆုံး VoIP ပံ့ပိုးသူများ၊ VoIP ပြန်လည်ရောင်းချသူများ စျေးအသက်သာဆုံးပေး virtual နံပါတ်, အစစျေးအသက်သာဆုံးအဖြစ်လူသိများ နံပါတ်များ DID နှင့်စျေးအသက်သာဆုံး DDI နံပါတ်များ ကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးအောင် VoIP ဝန်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေတယ် VoIP ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ စျေးအသက်သာဆုံးပေး ဒေသခံနံပါတ်များစျေးအသက်သာဆုံး မိုဘိုင်းနံပါတ်များစျေးအသက်သာဆုံး Tollfree နံပါတ်များ နှင့်စျေးအသက်သာဆုံး ကြိုးဖုန်းနံပါတ်များ.
မြင့်မားသောအရည်အသွေး "Value ကို" န်ဆောင်မှုများထည့်သွင်း
မှခွဲပြီး အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ် ဒါပေမဲ့ အရည်အသွေးမြင့်မားသော ကန့်သတ်ရုံဖြင့်မဟုတ်ဘဲ VoIP ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ virtual business နံပါတ်များနှင့်အခြား ၉၉ နိုင်ငံသို့မဟုတ်သင်၏အဆက်အသွယ်စင်တာကိုစတင်ရန်ကူညီခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသေးစားစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ CRM အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားရေးအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်းပေးသည်။ လူအင်အားအတိုင်ပင်ခံ, software ကိုအတိုင်ပင်ခံနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများ။
ပေးအပ်ခြင်း စုစုပေါင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းချက် in 107 နိုင်ငံများ.
ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီ၊ မိသားစုများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့လိုအပ်တာအားလုံးနီးပါးကိုကူညီနိုင်စွမ်းနှင့်အရင်းအမြစ်များနှင့်အခြားနိုင်ငံများရှိသည်။
သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့အားအရင်းအမြစ်များ၊ အဖွဲ့များနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကြောင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ခုတည်းထက် ကျော်လွန်၍ လူများအားပံ့ပိုးကူညီခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုများနှင့်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုအောင်မြင်စေလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့နှင့်အချိန်ပိုရင်းနှီးရမည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့ချစ်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
CRM ဆော့ဝဲ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားသူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အခမဲ့ CRM ဖြင့်ကူညီခြင်း။ ထုံးစံအားဖြင့် CRM ပေါင်းစည်းခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကြီးမားသောအဖွဲ့တစ်ခုရှိသည်။
သင်၏စီးပွားရေးအတွက်သို့မဟုတ် HR ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် HR လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အတူအကူအညီလိုသည် လူအင်အားလိုအပ်ချက်များ။ နေရာလွတ်များကိုတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့အလုပ်ပေါ်တယ်ကိုလည်းသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သငျသညျတိုးချဲ့စီစဉ်ခြင်းနှင့်လိုအပ်ပါတယ်လျှင် virtual ရုံးခန်း သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်သို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာ ၆၅ နေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
သင့်လုပ်ငန်းအတွက်မတူညီသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း ၁၅၀ ရှိသည် ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိ သို့မဟုတ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ။
သင့်အားကူညီရန်ရောင်းရန်တက်နေသောအမြတ်အစွန်းကြီးမားသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဝယ်ယူရန် ချက်ချင်း။
သင်လိုအပ်သောအထောက်အပံ့အားလုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်, ငါတို့ရှိသမျှသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း tools များပေး။
သင်အဘို့အလမ်းပြလိုလျှင် ICO လိုင်စင် အီးယူသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်တရားစီရင်မှုများအတွက်။
သင်အဘို့အလမ်းပြလိုလျှင် ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင် အီးယူသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်တရားစီရင်မှုများအတွက်။
သင်အဘို့အလမ်းပြလိုလျှင် crypto ငွေကြေးပိုက်ဆံအိတ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ အီးယူသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်တရားစီရင်မှုများအတွက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Software Development Company သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်အဆင့်မြင့်စိတ်ကြိုက်ဆော့ဖ်ဝဲလိုအပ်ချက်တို့နှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီသည်။
ငါတို့အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှု web developmentSoftware ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု E-commerce software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်မိုဘိုင်း App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
သင်၏ VoIP ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဦး ဆောင်နိုင်ရန်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်ပေါင်းစပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် VoIP ဝန်ဆောင်မှု
ဘာကြောင့် virtual နံပါတ်ကိုသာရသင့်တာလဲ၊ သင်ဆက်နေရန်ဆန္ဒရှိလျှင်၊ လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည်သူတို့၏ရုံးချုပ်ကိုတရားဝင်ရွှေ့ပြောင်းရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုကူညီပါ။
နေထိုင်ခွင့်နှင့်အလုပ်လုပ်ခွင့်စီးပွားရေးပိုင်ရှင် (များ) အတွက်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Virtual Numbers
VoIP ဆိုသည်မှာ Voice Over Internet Protocol၊ ၎င်းသည် analog တယ်လီဖုန်းလိုင်းများအစား Wi-Fi သို့မဟုတ် intranet ဆက်သွယ်မှုကိုအသုံးပြုပြီးအင်တာနက်မှတဆင့်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ပေး VoIP, တတ်နိုင် VoIPစျေးအသက်သာဆုံး VoIP စျေးပေါပေး virtual ဖုန်းနံပါတ်များထို့အပြင်စျေးပေါအဖြစ်လူသိများ ဖုန်းနံပါတ်များ နှင့်စျေးပေါ DDI ဖုန်းနံပါတ်များ ကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးအောင် VoIP ကုမ္ပဏီ အရာထောက်ပံ့ခဲ့သည် ဒေသခံနံပါတ်များ, မိုဘိုင်းနံပါတ်များ, အမျိုးသားနံပါတ်များ, သေဆုံးသူ - အခမဲ့နံပါတ်များ နှင့် ကြိုးဖုန်းနံပါတ်များ.
Virtual Phone စနစ်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
Virtual phone system သည်သင်၏ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်စီမံရန်ကူညီသည်။
ကျနော်တို့ပေး Virtual ဖုန်းစနစ်, တတ်နိုင် Virtual ဖုန်းစနစ်စျေးအသက်သာဆုံး Virtual ဖုန်းစနစ်အခမဲ့ Virtual ဖုန်းစနစ်ထို့အပြင်စျေးပေါအဖြစ်လူသိများ ဖုန်းစနစ် DID နှင့်စျေးပေါ DDI ဖုန်းစနစ် ကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးအောင် Virtual ဖုန်းစနစ် အရာစျေးပေါပေး ဒေသခံနံပါတ်များစျေးပေါ မိုဘိုင်းနံပါတ်များစျေးပေါ အမျိုးသားနံပါတ်များစျေးပေါ သေဆုံးသူ - အခမဲ့နံပါတ်များ နှင့်စျေးပေါ ကြိုးဖုန်းနံပါတ်များ.
၀ ယ်လိုအားပေါ် မူတည်၍ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် virtual နံပါတ်များကိုတစ်လလျှင် ၁ ဒေါ်လာဖြင့်စတင်နိုင်သည်။
မည်သည့် VoIP ဝန်ဆောင်မှုများကိုသင်ပေးသနည်း။
VoIP ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် VoIP ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ၊ Call စင်တာ၊ စီးပွားရေးအတွက် VoIP စနစ်၊ အိမ်အတွက် DID နံပါတ်များ၊ အိမ်အတွက် virtual နံပါတ်များ၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် VoIP ဖုန်းစနစ်၊ VoIP ဖုန်းစနစ်၊ SIP ရပ်စဲခြင်း၊ စီးပွားရေးနံပါတ်၊ စီးပွားရေးအတွက်နံပါတ်များ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ virtual နံပါတ်စနစ်၊ နိုင်ငံတကာဖုန်းနံပါတ်များ၊ VoIP လိုင်း၊ VoIP စနစ်၊ အိမ်တွင် VoIP ဖုန်း၊ မိုဘိုင်း virtual နံပါတ်များ၊ အသေးစားစီးပွားရေးအတွက် virtual နံပါတ်များ၊ VoIP အွန်လိုင်းအဓိပ္ပာယ်တိမ်တိုက်၊ အွန်လိုင်းစီးပွားရေးအတွက် virtual နံပါတ်၊ အိမ် VoIP၊ VoIP၊ ပုံသေ VoIP၊ VoIP ပုံသေ၊ VoIP နံပါတ်များ၊ DDI ဖုန်းနံပါတ်များ၊ DDI နံပါတ်များ၊ စီးပွားရေး VoIP၊ VoIP PBX၊ စီးပွားရေး VoIP၊ VoIP ခလုတ်၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် DID၊ DID ဖုန်းနံပါတ်များ၊ VoIP ဖုန်းနံပါတ်များ၊ ဆက်သွယ်ရန်စင်တာဖြေရှင်းချက်များ၊ VoIP တယ်လီဖုန်း၊ ခေါ်ဆိုမှုအတွက်၊ VoIP ခေါ်ဆိုမှုများ၊ VoIP စီးပွားရေးဖုန်း၊ စီးပွားရေးခေါ်ဆိုမှုများအတွက် virtual နံပါတ်၊ စီးပွားရေးအတွက် DID နံပါတ်များ၊ ခေါ်ဆိုမှုအတွက် DID နံပါတ်၊ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲနိုင်သောစီးပွားရေး DID နံပါတ်စနစ်၊ အခမဲ့ဖုန်းနံပါတ်များ၊ mobile VoIP၊ စီးပွားရေးအတွက် VoIP၊ siness VoIP ဖုန်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် VoIP ဖုန်းစနစ်၊ virtual ဖုန်းနံပါတ်များ၊ လူနေအိမ် VoIP၊ VoIP တံခါးပေါက်၊ DID နံပါတ်များ၊ cloud PBX၊ DID ဖုန်းနံပါတ်များ၊ မိုဘိုင်း DID နံပါတ်များ၊ VoIP ဖုန်း၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် VoIP ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ VoIP ရပ်စဲခြင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနံပါတ်များ၊ နံပါတ်များနှင့် VoIP ကြိုးဖုန်း။
ငါတို့ကထိပ်ဆုံးကပါ VoIP ကုမ္ပဏီများ, ထိပ် VoIP ပံ့ပိုးသူများ, ထိပ် VoIP ပြန်လည်ရောင်းချသူများ စျေးပေါပေး virtual နံပါတ်ထို့အပြင်စျေးပေါအဖြစ်လူသိများ နံပါတ်များ DID နှင့်စျေးပေါ DDI နံပါတ်များ ကျွန်တော်တို့ကိုထိပ်အောင် VoIP ဝန်ဆောင်မှုထိပ်ဆုံးသို့အောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်စေခြင်း VoIP ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ စျေးပေါပေး ဒေသခံနံပါတ်များစျေးပေါ မိုဘိုင်းနံပါတ်များစျေးပေါ Tollfree နံပါတ်များ နှင့်စျေးပေါ ကြိုးဖုန်းနံပါတ်များ.
VOIP တွင်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ - Virtual Number